KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Meydka Ruux Rayid ah oo saaka laga helay Jowhar
Wednesday 12 December 2012 10:16
Meydka Ruux Rayid ah oo saaka laga helay Jowhar
Muqdisho (KON) Wararka naga soo gaaraya magaalada Jowhar gaar ahaan xaafada Horseed waxa saaka lagu arkay meydka qof rayid oo rasaas ka muuqatay jirkiisa.
Goobjooga ayaal ku sugan Jowhar ayaa sheegay in saaka meydka ruuxaan lagu arkay halkaas iyada oo aanan la garanaynin cida ka danbaysa dilkaan, iyo sababta loo dilay ruuxaan intaba.
Wararka ayaa sheegay in ruuxaan hubaysan ee lagu dilay magaalada Jowhar ay toogteen kooxo ku hubaysan Bastoolado kuwaasi oo baxsaday markii ay dilka ay geesteen ka dib.
Xaafada Horseed waxay ka mid tahay afarta xaafadood ee kutaalla degmada Jowhar waxayna ka mid tahay meelihii ciidamada dawlada iyo kuwa AMISOM seddex cisho ka hor la wareegeen.
Ururka Al-shabaab loo maleynayaa inay ka dambeeyaan dilka qofkaasi rayidka ahaa waxaana ciidamadu goobta ay gaareen saaka iyadoo meydkana meesha laga soo qaado muddo kadib.